Unugyada xusuusta haga oo maskaxda lagu beeri karo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Unugyada xusuusta haga oo maskaxda lagu beeri karo
La daabacay fredag 7 juni 2013 kl 16.36
Waxaa inta qofku nool yahay maskaxdiisa lagu beeri karaa in ku dhow saddex meelood oo meel unugyada ay ka samaysan tahay qaybta xusuusta dhow ee maskaxda. Sidaas waxaa lagu sheegay daraasad cusub oo uu soo saaray Machadka Karolinska ee ku yaal degmada Solna.
Waxaa baaritaan shaybaar oo hadda ka hor lagu sameeyey xayawaan lagu ogaaday in maskaxda jiirka ama doolliga ay ku samaysmaan unugyo cusub oo beddela kuwii hore oo dhintay. Daraasooyin badan oo horay loo sameeyeyna waxaa si dadban loogu ogaaday in dadkana ay si la mid ah maskaxdooda ugu samaysmi karaan unugyo cusub. Waxa cusub oo hadda daraasaddaan lagu muujiyey waxa weeye in aqoonyahannadu ay cabbiri karaan inta ay le’ekaan karaan unugyadaas cusubi. Waxaa baaritaano lagu sameeyey maskaxda qaybteeda xusuusta dhow oo laga soo qaaday meydadka 55 qof oo da’doodu u dhexeysey 19 ilaa 92 sano. Cabbir lagu sameeyey qiyaasta waxa loo yaqaan Kol-14 oo ku jira jinsiga DNA qofka waxaa lagu guuleystey in lagu muujiyo in qofku inta uu nool yahay ay si joogto ah maskaxdiisa ugu samaysmaan unugyo dareenwadayaal cusub.
Qumbulado hubka halista oo lixdameeyadii qarax lagu tijaabiyey ayaa keenay in maaddooyin shucaac ah oo loo yaqaan Kol-14 ay ku samaynmeen hawada. Ilaa xilligaasna, sannad walba waa la cabbiraayey inta maaddaas shucaacaas hawada gashay le’eg tahay. Waxaana la barbardhigay maaddooyinka la mid ah oo ku jira unugyada maskaxda oo sheega da’da unugyada.